Global Voices teny Malagasy » Niezaka Nanafina Ny fanaony Mihaino Resaka An-tariby Ny Fitondrana Makedoniana Teo Aloha · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 01 Febroary 2018 7:10 GMT 1	 · Mpanoratra Marko Angelov Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Eoropa Afovoany & Atsinanana, Israely, Makedonia, Hafanàm-po nomerika, Hehy, Mediam-bahoaka, Politika, GV Mpisolovava
Lasa anisan'ny fomba fanao ara-politika Makedoniana ny “Fiara mavo” tsy tena izy. Nampiasa azy io tamin'ny sariny ao amin'ny Twitter ny vondrona mpanesoeso “(Tolotra Vahiny), manasongadina ny sariitatr'ireo mpikambana ambony ao amin'ny fitondrana VMRO-DPMNE:Ilija Dimovski , Gjorge Ivanov , Gordana Jankuloska , Nikola Gruevski , ary Sasho Mijalkov .
Nanasongadina ny hagoavan'ny kolikoly nataon'ny fitondrana mpandrendri-bahoaka teo aloha tao Makedonia, tamin'ny fikasany hanafina ny fanararaotam-pahefana ny fanambarana vao haingana iray.
Tamin'ny taona 2015, nampiseho ny tahiry horonam-peo sy tahirin-kevitra marobe navoakan'ny mpitarika mpanohitra tamin'izany fotoana izany, Zoran Zaev, avy ao amin'ny antoko Sosialy Demokraty (SDSM) fa noraketina mangina ny fifandraisan'ireo olona maherin'ny 20.000 tany Makedonia – anisan'izany ireo mpanao gazety sy mpikatroka fiarahamonim-pirenena  maherin'ny 100.
Efa nanambara hatry ny ela ny governemanta teo aloha, notarihin'i Nikola Gruevski sy ny antoko VMRO-DPMNE  fa ny sampam-pitsikilovana vahiny no tompon'andraikitra tamin'ny hetsika fanarahamaso faobe tsy ara-dalàna. Tratra ny filazan'izy ireo tamin'ny taona 2015, ary milaza ny vaovao avy amin'ny SPO fa nanao ezaka tsy mahazatra izy ireo mba hanamboatra antontan-taratasy hosoka hanohanana ny filazan'izy ireo.
Ny herinandro lasa teo, nanambara ny SPO fa nahita porofo vaovao izy, izay ahitana ireo manampahefam-panjakana teo aloha nanakarama orinasa vahiny hanamboatra tatitra milaza fa ireo mpiasa vahiny – fa tsy ny governemanta mihitsy – no tompon'andraikitra tamin'ny hetsika fihainoana resaka an-tariby. Nanambara ny fampahalalam-baovao taty aoriana fa avy any Israely ilay orinasa miafina .
Tamin'ny volana septambra 2014, nanambara ny SDSM mpanohitra tamin'izany fotoana izany fa nahazo vaovao tafaporitsaka manaporofo ny fanararaotam-pahefana faobe nataon'ny fitondrana izy ireo. Nangataka tamin'ny governemantan'ny VMRO-DPMNE izy ireo mba hametra-pialana sy hanome ny fepetra hisian'ny fifidianana marina. Nandà ny praiminisitra Nikola Gruevski tamin'izany fotoana izany, ary volana maromaro taty aoriana – tamin'ny febroary 2015 – nanomboka namoaka sombin-dahatsoratra misy ny fihainoan-dresaka an-tariby tafaporitsaka  ny Sosialy Demaokraty. Nanimba tanteraka ny fahatokisana ny governemanta ireo ary niteraka onjam-pihetsiketsehan'ny olom-pirenena.
Tamin'ny ezaka hampitsahatra ny raharaha, nanao kabary fampitandremana ny mpanara-dia azy i Gruevski tamin'ny Janoary 2015 mba tsy hino ny fiampangana lazain'ny Sosialy Demokraty. Nolazainy avy eo fa namatsy fitaovana fihainoan-dresaka an-tariby tsy ara-dalàna ho an'ny Sosialy Demokraty ny fahefana vahiny, milaza fa araha-maso avy ao amin'ny fiara mavomavo misy fitaovana finday fihainon-dresaka ny fifanakalozan-dresaka. Nitarika fivadihana lehibe nataon'ny mpitarika ny mpanohitra, Zoran Zaev, izay lasa Praiminisitr'i Makedonia taty aoriana sy ankehitriny ireo fiampangana fifandonana amin'ny mpitsikilo vahiny ireo.
Saingy araka ny fanavaozam-baovao  avy amin'ny SPO, izany rehetra izany dia ampahany amin'ny drafitra mba tsy hanomezan-tsiny ny governemanta.
Milaza ny porofo hita fa nandritra ny volana Oktobra sy Novambra 2014, noho ny fangatahan'ny iray amin'ireo olona ahiahiana izay nitàna ny toeran'ny lehiben'ny Departemantan'ny Teknolojia ao anatin'ny Sampan-draharahan'ny Fiarovana sy fanoherana ny Fitsikilovana nandritra io fotoana io, namoaka tatitra ny orinasa vahiny iray milaza fa nahatsikaritra, “tamin'ny fitaovan'izy ireo manokana”, asa tsy ara-dalàna avy amin'ny toby tsotra (roa) tao amin'ny faritra ao an-tanànan'i Skopje. Tokony hanamafy ny tombatomban'ny manampahefana teo amin'ny fahefana tamin'izany fotoana izany ity tatitra ity, fa notarihan'ny sampam-pitsikilovana vahiny ny fitsabahana faobe tsy ara-dalàna.
Nomena tambiny tamin'ny alalan'ny tolo-bidy navoakan'ny Minisitry ny Atitany, izay nosokajian'ny SPO fa “fomba haingana indrindra hahazoana fifanaraham-barotra amin'ny fanjakana” amin'ny fampitaovana nanomboka ny 16 hatramin'ny 24 Desambra 2014 ilay orinasa vahiny, izay mbola notononina anarana.
Mijanona ho tsiambaratelo ny antsipiriany momba ny fanadihadiana, anisan'izany ny karazana fitaovana novidiana sy ny fitambaran'ny hetra naloa tamin'ny fividianana. Saingy milaza ny vaovao navoakan'ny SPO fa nisy ny fanitsakitsahana lalàna sy fitsipika manan-danja marobe nataon'ireo manampahefana roa tao amin'ny Sampan-draharahan'ny Fiarovana sy Fanoherana Fitsikilovana, izay notarihan'i Sasho Mijalkov, zanak'olo-mpiray tampo amin'ny Praiminisitra teo aloha tamin'izany fotoana izany.
Nanambara ny mpikambana taloha tao amin'ny governemanta fiaraha-mitantanan'i Gruevski fa niezaka nandresy lahatra azy ireo izy tamin'ny fampisehoana ny tatitra namboamboarina nandritra ny fivoriana iray, saingy tsy nanome porofo azy ireo amin'ny kopia orizinaly.
Nilaza ny loharonam-baovao tsy fantatra nampiasain'ny haino aman-jery tsy miankina fa avy any Israely ilay orinasa. Mbola tsy navoaka ny anaran'ilay orinasa, fa nilaza fotsiny ny vaovao fa tsy ny orinasa Israeliana voarohirohy teo aloha tamin'ny kolikoly mifandraika amin'ny fifidianana fitaovana fanarahamaso hafa  ho an'ny Ministeran'ny Atitany izany.
Maro ireo Makedoniana tsy nino ny tantaran'ny “fiara mavo”. Noheverina fa tsy azo inoana izany ka lasa lohahevitra famazivaziana sy fanesoana avy hatrany.
Nohamafisina tamin'ny tatitra  iray manan-danja avy amin'ny Vaomiera Eoropeana teo aloha, Reinhard Priebe, izay nivoaka tamin'ny Jona 2015 izany, ho ezaky ny Vondrona Eoropeana hanadihady ireo fihainoan-dresaka an-tariby. Nilaza ny tatitra fa “tsara kalitao, ambaratonga sy isa izay azo ekena amin'ny ankapobeny ilay fandraketana izay natao tao amin'ny tranon'ny sampam-pitsikilovam-pirenena.
Nanamarika ny fanadihadiana resaka ara-politika 2016 avy amin'ny tranonkala manamarina ny zava-misy, Truthmeter  fa taoriana kelin'ny fotoana, nanakana ny fampiasana ny tantaran'ny tolotra vahiny ny fitondrana:
Tsy mbola nolazaina mazava indray nandritra ny kabariny ampahibemaso taorin'izay (ary maro be izany) ny antsipiriany navoakan'ny Praiministra teo aloha tamin'ny 31 Janoary  .
Saingy tadidy hatrany ity ezaka miharihary hamitaka ny vahoaka ity. Ohatra, nametraka solon'anarana “Tolotra Fitsikilovana vahiny” tamin'ny taona 2015 ny vondrona mpanakanto tsy fantatra anarana. Nandritra ny taona vitsivitsy taorian'izay, namoaka sariitatra sasantsasany manandanja indrindra izy ireo, tamin'ny fampiasana imbetsaka ny fiara mavomavo ho toy ny marika sy fango. Ireto sasantsasany amin'ireo sariitatra niparitaka tamin'ny Twitter, ny sasany ahitana fanehoan-kevitra ara-tsosialy be dia be:
Малата Анастасија од Скопје ни покажува како да направиме жолто комбе. Вели дека татко и полудувал кога ќе видел ваква играчка по дома 🙂 pic.twitter.com/LY4eu0lafA 
Anastasija Kely [anaran'ny iray amin'ireo zanaka vavin'i Gruevski] nampiseho anay ny fomba fanamboarana fiara mavomavo. Nilaza izy fa ho tezitra mafy i dada raha mahita kilalao tahaka izao ao an-trano 🙂
REHEFA AVY EO: Fampirantiana taloha momba ny Sampan-draharaham-pitsikilovana Vahiny izay tsy ampiasaina intsony, fa nampiasaina taloha hanasaratsarahana an'i Makedonia! Sary: Fiara namboarin'ny orinasa Yogoslavy, Zastava Automobiles, ela be talohan'ny taona 1990.
Manaraka ny toro-hevitry ny Tanànan'i Skopje momba ny fahalotoan'ny rivotra izahay. Manomboka androany, fiara mavomavo elektrika ihany no hitanao eny amin'ny arabe.
Ny sary namboarina manaraka kosa dia manohitra ny fiara mavomavo novaina ho iray amin'ireo liona zarazara hoditra  natao tao anatin'ny tetikasa Skopje 2014  mampiadihevitra.
Sampan-draharaham-pitsikilovana Vahiny Megatron mifampitana amin'ny VMRO Grimlock. Iza no handresy?
Vao maika nahatonga adihevitra bebe kokoa momba ny tranga fihainoan-dresaka an-tariby sy ny fiantraikany any aoriana ny fanambarana vaovao avy amin'ny Biraon'ny Fampanoavana manokana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/02/01/112980/
 Twitter : https://twitter.com/sluzbi
 Gjorge Ivanov: https://en.wikipedia.org/wiki/Gjorge_Ivanov
 mpikatroka fiarahamonim-pirenena: https://globalvoices.org/2015/07/14/in-sweeping-effort-to-spy-on-civil-society-macedonia-broke-its-own-privacy-laws/
 avy any Israely ilay orinasa miafina: http://fokus.mk/fokus-express/gruevski-platil-milioni-na-firma-od-izrael-za-da-izmisli-zholto-kombe/
 sombin-dahatsoratra misy ny fihainoan-dresaka an-tariby tafaporitsaka: http://truthmeter.mk/the-wiretapping-records-the-opposition-broadcasted-audio-video-transcripts/
 kolikoly mifandraika amin'ny fifidianana fitaovana fanarahamaso hafa: http://truthmeter.mk/wiretapping-scandal-set-15-israeli-equipment/
 tranonkala manamarina ny zava-misy, : http://truthmeter.mk/where-did-gruevski-s-foreign-secret-services-disappear/
 iray amin'ireo liona zarazara hoditra: https://globalvoices.org/2010/09/08/macedonia-bronze-lions-accountability-transparency/
 tetikasa Skopje 2014: https://en.wikipedia.org/wiki/Skopje_2014